FAALADDA JIMCAHA: M/weynaha Somaliland maka dabaalan doona Dufaanada Colaaddaha, Siyaasadda & Kacdoonka gudihiisa ka jira, mise wuu ku hafan doonaa? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home 2018 April W.Gudaha, Wararka Maanta, Warbixino FAALADDA JIMCAHA: M/weynaha Somaliland maka dabaalan doona Dufaanada Colaaddaha, Siyaasadda & Kacdoonka gudihiisa ka jira, mise wuu ku hafan doonaa?
FAALADDA JIMCAHA: M/weynaha Somaliland maka dabaalan doona Dufaanada Colaaddaha, Siyaasadda & Kacdoonka gudihiisa ka jira, mise wuu ku hafan doonaa?
April 20, 2018 |by W LAASCAANO| 1
HARGEYSA(P-TIMES) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo xilka jooga wax ka yar shan bilood ayey wajaheen caqabadihii ugu xooga badnaa oo kaga yimaada dhinacyada xaduudaha derisyadiisa, Siyaasadda dibada iyo midda gudaha deegaanada maamulkaas oo gaartay heerkii ugu sareeyey, waxaana is qabsaday qeylo dhaan xoog badan.
Muuse Biixi Cabdi oo kusoo baxay natiijo shaki badan hareeyey, ayna isku hayeen dhinacyada Siyaasadda ee deegaanadaas ayaa dhaxlay Shacab aad ugu kala fogaaday loolankii doorashadii xooga badneyd ee kadhacay deegaanada Somaliland, wuxuuna balan qaaday dib u kabasho iyo mideynta Shacabkii doorashadu kala kaxaysay.
BEESHA DHEXE EE SOMALILAND?
Beesha dhexe ee Somaliland ayaa u kala jabtay si aan horey u dhicin, waxayna kala noqdeen mucaarad iyo muxaafid, waxaa soo baxday Kalmada JEEGAANTA oo noqotay mid caan-baxday, isla markaasna loola jeedo gaanshaanbuursi siyaasadeed oo ay yeesheen beesha dhexe ee Somaliland qaar kamid ah, taas oo si weyn ay uga dudsan yihiin garab kale oo isla beesha dhexe ah awood balaaran leh.
Ninka sidda adag ay u loolameen Muuse Biixi ee Cabdiraxmaan Cirro oo ka soo jeeda beelaha dhexe ee Somaliland, wuxuu bilaabay loolan adag oo uu ku fashilanayo qorshe kasta oo ay ciyaarayso Madaxtooyada ee ay hogaaminayaan Xisbiga Kulmiye.
Mid kamid ah beelaha awooda badan ee Somaliland ayaa ku balansan Kulanweyne dhici doona bisha June, kaas oo halis weyn ay ka aminsan tahay Xukuumada Somaliland, waxaana kulankaas suuragal ay tahay in ay ka soo baxaan go’aamo aan farxad galin doonan Madaxweyne Muuse Biixi.
Muuse Biixi kuma guuleysan in uu saameyn hoose ku yeesho shirkaas, sidii loo baajin lahaa, mana jirro ilaa hadda wax waqti ah oo ay Madaxtooyadu galisay sidii ay saameynteedu u noqon lahayd mid togan, sidda ay ku waramayaan dadka aadka ula socda siyaasadda Somaliya.
DP WORLD, ITOOBIYA & IMAARAATKA CARABTA?
Laakiin sheekada ayaa meel sare gaartay markii ay soo baxday sheekada ku saabsan heshiiska Saami qeybsiga Dekeda Berbera, kaas oo ogolaanaya in ay Somaliland oo leh Berbera ay ka heshay oo kaliya 30%, halka inta badan saamiga ay qaateen wadamada Itoobiya & Imaaraatka Carabta, taasi waxay noqotay mid aan farxad iyo niyadsami ku abuuran shacabka oo qarkood horeyba u dhaliilsanaa Xukuumadda.
DF Soomaaliya & Somaliland?
Xiisaddu markale ayay cirka isku shareertay markii ay Dawladda Faderaalka Soomaaliya si cad u sheegtay in aysan aqoonsaneyn heshiiska Berbera aana waxba laga qaban Karin, intaas oo kaliya loogama harine waxaa la joojiyey oo dalka Soomaaliyaba laga mamnuucay shirkada DP WORLD oo ahayd bud-dhigaha heshiisyadan.
Somaliland waxay ka dhex kicisay arrintan buuq siyaasadeed oo ilaa hadda dagi la’a gaarayna heerkii ugu sareeyey, waxaana aan la aqoon sidda ay madaxtooyadu u wajahday arrimahaas.
DAGAALKA XADUUDA PUNTLAND?
Madaxweynaha Somaliland isagoo doonaya in uu qariyo ama iska jeediyo qaar kamid ah beelaha gobalada Barriga & Togdheer ayuu ciidamadiisa ku amray in ay qabsadaan deegaanka Tukaraq ee ay haysteen Puntland, taas oo dhacday 08 January 2018, wali xiisad ayaa ka taagan cabsi weyn ayaana laga qaba dagaal culus oo ka dhaca.
Ma jirto garowshiyo Madaxweynaha Somaliland ciidamadiisa kala baxayo deegaankaas, si ugu yaraan ay uga dagan colaaddaha uga imaanaya deriskiisa, laakiin falanqeeyaasha ayaa rumeysan in dagaal dhacaa hadda uu fursad siin karro midowga Beelaha Somaliland.
XARIG, HANJABAAD & XABSIYO QARSOODI AH?
Sadexdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa la diwaangaliyey in ay jirtay dad badan oo laga soo qabtay meelo kala duwan, loona xiray arrimo siyaasadeed iyo fikradooda oo ay banaanka keenen, qaarkood waxaa lagu xiray hadalo ay ku qoreen barahooda bulshada, qaarna Calanka Soomaaliya oo ay muujiyeen ama ka hadleen.
Sidaas oo kale dadka laxiray waxaa ku jira gabdho, wiilal, Isimo nabad ku baaqay & Dad gabi ahaanba aragtidooda ka muujiyey waxay ka aaminsan yihiin Xukuumada Madaxweyne Biixi.
Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Xabsiyadu ay ka buux-dhaafeen dad badan oo lasoo qabtay, ilaa haddana qaarkood aysan helin nidaamka saxda ah ee cadaaladda, gaar ahaana Garsoor ka madax banaan kan Madaxtooyada Somaliland amarto.
HADALKII UGA DARNAA TOOGASHADA EE CIRRO KU YIRI BIIXI?
Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee WADANI Cabdiraxmaan Cirro oo la hadlay wariyaasha ayaa si adag uga hadlay waxa dhacaya, wuxuuna luuqadii ugu adkeyd ee xagga siyaasadda ah kulahadlay Madaxdii iskaga dambeysay Xukunka, gaar ahaan Siilaanyo & Biixi oo uu sheegay in ay mudan yihiin in maxkamad la keeno.
Cirro wuxuu ku dhaartay in ay ku dhaceen Khiyaamo Qaran oo aysan sii heyn doonin xilka Madaxtinimada ee Somaliland, ee loo baahan yahay doorasho waqtigeedii kasoo hormarta ama ugu yaraan in xilka laga xayuubiyo Muuse Biixi Cabdi.
Falanqeeyaasha Siyaasadda ayaa rumeysan in uusan Madaxweynaha Somaliland wali garowsan waxa ku dhacaya, gaar ahaana Dufaanada Siyaasadda iyo colaadaha dul-hoganaya, isagoo wali ku ciyaaraya arrimaha hoose ee taagan.
Muuse Biixi oo lagu tiriyo nin xukunka jecel, Askari ah, haddana go’aanadiisa ku adkeysta ayaa hadda wajahay marxaladihii ugu adkaa ee uu abid taabto, marka laga hadlayo dhinaca siyaasadda, waxaana aan la aqoon xagga u jiheyn doono giraanta siyaasadeed ee sidda aadka u wareegaysa saacadihii ugu dambeeyey.
One thought on “FAALADDA JIMCAHA: M/weynaha Somaliland maka dabaalan doona Dufaanada Colaaddaha, Siyaasadda & Kacdoonka gudihiisa ka jira, mise wuu ku hafan doonaa?”
Abdiweli April 21, 2018 at 1:55 am · Edit
beesha dhexe beel kaloo dhexe ayaa ku dhextaal. waa tay jeegaanta u bixiyeen. xisbiyadii beelaha iidoor kala lahaayeen ayaa quud aan jirin isku qabqabsanaya